Virus ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ | mmCert
Window7အတွက် Autorun ပိတ်ခြင်း
BitDefender Antivirus, Scan, Kaspersky Lab Antivirus,F-secure Antivirus, Symantec Norton Antivirus, Panda Software Titanium Antivirus, Avira Antivirus Personal, Avast Antivirus, Trend Micro PC-cillin, AVG Antivirus များမှာ Top Ten antivirus software များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Antivirus Software တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် License Version ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Kaspersky Software ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်အများဆုံး Software လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မိမိကွန်ပျူတာအား ဗိုင်းရပ်(စ်)ကာကွယ်ရန်အတွက် Antivirus Software များကို မိမိစက်တွင် တင်ထားရုံဖြင့် Virus ကို ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု တစ်ထစ်ချ မသေချာသေးပါ။ အချို့ Antivirus များတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်း ပြနေသော်လည်း အချို့တွင် မလုပ်နိုင်ဘဲ ကျန်ရှိနေတတ်သည်များလည်းရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့် Antivirus Software အသုံးပြုသူ များသည် အမြဲတမ်း Update ကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ Antivirus Software Version အသစ်များထွက်လျှင်လည်း လိုက်ပြီး မိမိ Antivirus Software ကို Upgrade လုပ်သင့်ပါတယ်။ Antivirus Software များကို Licensed Version များဖြင့် ဝယ်ယူ အသုံးပြုနေသော်လည်း အသုံးပြုသူများမှာ Update ပြုလုပ်ခြင်းကို ဂရုမပြုပါက ဗိုင်းရပ်(စ်)ကို ဝင်ရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများနိုင်ပါတယ်။ Antivirus Software တစ်ခု တင်ထားပါက အမြဲ Update ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်(စ်)အသစ်များကို ဖမ်းယူနိုင်ခွင့် ပိုများပါတယ်။ “Antivirus” မှာ Bit Defender မှာ စစ်လိုက်လို့ လွတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင် Kaspersky နဲ့ စစ်တဲ့အခါမှာ မိနေတတ်ပါတယ်။ Kaspersky မှာ မတွေ့တာကို Norton မှာ မိနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲ Update လုပ်ပြီး အမြဲတမ်း ဗိုင်းရပ်(စ်) ရှာသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ မိမိရဲ့ အရေးကြီး Data တွေအတွက် စိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ စက်မှာ “Offline” နဲ့ အသုံးပြုရင်တောင် Update File တွေကို အမြဲတမ်း Download ချခြင်း (သို့မဟုတ်) CD ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် Update လုပ်သင့်ပါတယ်။ USB Flash Drive နှင့် External Hardisk တွေကို သုံးတဲ့အခါမှာလည်း အမြဲသတိရှိသင့်ပါတယ်။ Auto Run ကိုလည်း ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဖွင့်မယ်ဆိုရင် Scan အရင်ဖတ်သင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်ချိတ်ထားတဲ့ စက်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ စဖွင့်တာနဲ့ Antivirus Software ကို Update အရင်လုပ်ပြီး USB ကို စစ်ပြီးမှ ဖွင့်သင့်ပါ တယ်။
Autorun စနစ်ဟာ Computer မှာ Removable Drive ထိုးလိုက်ရင် (သို့မဟုတ်) CD ထည့်လိုက်ရင် အလိုအလျှောက် Computer ကို အလုပ်လုပ်စေတဲ့ စနစ်ပါ။ ဒီစနစ်ဟာ Virus အလွယ်တကူ ဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကို ဖွင့်ထားခဲ့ရင် Removable Drive ကို Computer မှာ ချိတ်လိုက်ရုံလေးနဲ့ Computer ဟာ Removable Drive ထဲက Virus က ရေးထားတဲ့ Autorun.inf ဆိုတဲ့ File လေးကို လိုက်ရှာပြီး သူခိုင်းသမျှ Command တွေ အကုန်လိုက်လုပ်တော့တာပါပဲ… Removable Drive ချိတ်လိုက်ရုံလေးနဲ့သင့် Computer ကို စက္ကန့်ပိုင်းမှာ Virus က ချုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့ဟာ Autorun စနစ်ကို ပိတ်ဖို့ဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
1. Start ရဲ့ All Program ကနေ Run ကို Click နှိပ်ပါ။
2.Run Box တွင် gpedit.msc ရိုက်ပြီး Ok ကို နှိပ်ပါ။
3.ပွင့်လာတဲ့ Box မှာ Administrative Templates ကို Click နှိပ်ပါ။
4.ဘေးကွက်က system ကို click နှိပ်ပါ။
5.ထပ်ပွင့်လာတဲ့စာတန်းတွေထဲမှာ Turn Off Auto Play ဆိုတဲ့ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကို ရွေ းပါ။
6. ပွင့်လာတဲ့Box မှာ Enable ကို Click နှိပ် ပြီး ရွေးချယ်ပါ။ Drop-down list ထဲက All drives ကိုရွေးပါ။ Click Ok ဒါဆိုရင်တော့ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ Virus မဝင်နိုင်တော့ ပါဘူး။
Window Vista အတွက် Autorun ပိတ်ခြင်း
ကီးဘုတ် +R ကို click နှိပ်ပါ။
gpedit.msc ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ။ User Account Control ပေါ်လာရင် Continue ကို click လုပ်ပါ။ ဘယ်ဘက်က tree pane ထဲမှာ Local ComputerPolicy\_ComputerConfiguration\_AdministrativeTemplates\_WindowsComponents\_ Autoplay Policies ကိုရွေးပါ။ Turn off autoplay ကိုရွေးပါ။ Enable ကို click နှိပ်ပြီး Ok ကို click နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Default behavior for Autorun ကို double click နှိပ်ပါ။ Enable ကို click နှိပ်ပါ။ Do not execute any autorun command ကို drop-down list ကနေ ရွေးပါ။ ပြီးရင် Click OK.
Run box တွင် gpedit.msc ရိုက်ပါ။ Local Group Policy Editor တွင် Local Computer Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> Window Components -> AutoPlay Policies ရဲ့ ညာဘက်တွင် Turn off Autoplay ကိုဖွင့်ပြီး Enabled လုပ်ခြင်းဖြင့် AutoPlay ကို ပိတ်နိုင်ပါသည်။
သင့်၏ စက်အား AutoPlay မှ ဝင်ရောက်နိုင်သော Virus Attack ကို ကာကွယ်နိုင် ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စာဖတ်သူတို့အတွက် သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်ရမည့် သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများကိုုလည်း ဖော်ပြပေးသွားပါဦးမည်။